Daryeelka Orchids - oo ku qoran talooyinkan soo bandhigi doona
Daryeelka Orchids - Sida Loo Helo Orchids | Guriga beeraha
Sidee baa kor loogu qaadi karaa orchids?
Qalabka ugu caansan ee daryeelka xanaanada
Orchidaceae ama Orchidaceae waxaa loo yaqaanaa mid aad u caan ah waxayna ku faaftaa warshadda aduunka.
Daryeelka orchids ee haboon
Orchidku waxay ka danbeeyaan qoyska Daisy, oo loo yaqaan Asteraceae, kooxda labaad ee ugu weyn ee kala duwan ee dhirta qorraxda.
Daryeelka orchids ee fiican
Waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo qurux badan. Sababtan awgeed, orchid waa boqoradda ka mid ah dhirta ubaxyo badan oo ubaxyo.
Kala duwanaanshaha noolaha ee orchid waa weyn. Guud ahaan waxaa jira ilaa 30.000 noocyada la oggol yahay. Qoraalka soo socda ayaa sharraxaya talooyin iyo khiyaalooyin loogu talagalay daryeelka iyo habka wanaagsan ee orchids. Waxa kale oo ay ka hadlaysaa khaladaadka ku yimaada daryeelka isbitaallada inta badan.
Asal ahaan, orchid waa mid aad u sahlan in la isticmaalo warshad aan saldhig u lahayn.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaladaad dhowr ah oo lagu sameyn karo daryeelka orchid. Sidaa daraadeed taasi ma dhicin, orchids waa ay fiicantahay, qoraalka soo socda wuxuu ku siinayaa macluumaad ku saabsan sida saxda ah loo sameeyo.
Kacaawinta orchid waxaa si fiican loogu dallacayaa xaaladaha qaabdhismeedka saxda ah. Tan waxaa ka mid ah iibsashada dheriga warshad ku haboon ee orchid. Halkan, cabirka dheriga ayaa muhiim ah. Fadlan hubso in dheriga for orchid aad ka mid ah size size ku habboon geedka.
Tani macnaheedu waa in dheriga orchid aysan aheyn mid aad u weyn. Taasina waxa weeye in dhirta dhirta ee orchid ay siinayso xasillooni. Si kastaba ha noqotee, dherer weyn oo ah ujeedkani lama fulin karo. Kiisaska ugu xun, orchid si fiican looma taageero sababtoo ah dheriga weyn. Si kastaba ha ahaatee, tani waa lagama maarmaan si markaa ubaxu si fiican u koraan. Xaaladdan, meel bannaan oo dheeraad ah micnaheedu maaha koritaan dheeraad ah, laakiin ka soo horjeeda. Waxay xanuujisaa dhirta haddii aad ka iibsato dheriga weyn.
Badanaa, qaladkan waxaa la sameeyey oo lagu caddeeyay xaqiiqda ah in dhirta ay wali sii kordheyso, tanina horeyba waa loo bixiyaa bilowga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay siin doontaa warshad muhiim u ah koritaanka. Orchid aan xasilooni ku lahayn dheriga si fiican u kori maayo. Sidaa daraadeed, fadlan gaari dherer yar. Kaliya markaa xididdada orchid waxay fursad u yeelan karaan inay si iskood ah ugu dadaalaan.
Intaa waxaa dheer, dheriyada yar yar waxay ku habboon yihiin marka la eego biyaha la daadiyo. Waqtigan xaadirka ah, waa in la ogaadaa in orchids aysan jeclayn heerarka ballaaran ee biyaha. Sidaa daraadeed waa habboon tahay dheriga yar ee aad ku beeraneyso orchid-kaaga oo aad si joogto ah ugu dhajisey qadar yar oo biyo ah. Sidaas darteed waad badbaadin kartaa dhibaatooyinka la xidhiidha dherigii weynaa.
qadarka oo biyo ah
Tusaale ahaan, mid ka mid ah dhibaatooyinkan ayaa ah in marka biyaha ay sarreeyaan, orchid aysan si buuxda u nadiifin karin biyaha. Dabadeedna biyuhu waxay ku socdaan qoraxda. Natiijo ahaan, xididdada dhirta waa lama huraan si joogto ah u qoyan. Haddii xaaladdan aan la ogaan wakhtigeeda, dhirtu waxay noqotaa jirro. Tani waxay muujinaysaa xaqiiqda ah in xididdada kallanaayeen. Xaaladdani waxay muhiim u tahay orchid. Waqtigaan, iyadu ma sii bixin karto nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Haddii xaaladan aan la aqoonsan, dhirta way dhiman kartaa. Tani waa in laga fogaadaa dhammaan kharashyada. Fadlan marwalba hubi in aysan jirin biyo dheriga.
Geedka waxaa lagu shubay biyo badan
Sida geedka kale, orchids waxay u baahan yihiin biyo si ay ugu noolaadaan. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah orchids ayaa baxa oo aan bixin karin biyo badan sababta oo ah guryaha gaarka ah, qiyaasta saxda ah ayaa lagama maarmaan ah.
Sidee baan u daryeelaa orgiimadayda ubax?
Ka dib markii xididdada si dhammeystiran loo soo celiyo, biyaha haray waa in laga saaraa. Haddii kale, geedka waxaa lagu hanjabaa dhimasho. Sidaa daraadeed, khatarta ah in dhirta la nuugo waa ay ka weyn tahay khatarta geedka qallajinta. Sababtoo ah astaamaha, Orchid wuxuu si fiican u noolaan karaa biyo la'aan muddo dheer. Sidaa daraadeed xaqiiqda ayaa ah alfa iyo omega ee daryeelka orchid.
2) Orchid ma aha qoraxda - qorraxda tooska ah
Si ka duwan sida dhirta kale oo badan, orchid jecel yahay qorraxda, laakiin kaliya dhexdhexaad ah. Orchides oo aad u dheeraa qorraxda, waxay u nugul tahay adigoo helaya dhibco mugdi ah. Tani ma wanaagsana oo geedka ayaa dareemaya raaxo la'aan. Xaaladdan waa inaad raadisaa meel cusub oo shadier ah oo ubax ah. Iftiimo badan ayaa caawiya orchid, laakiin ma iftiin qoraxda tooska ah.
3) Hawo xun - ha ku dhaafin kuleylka xilliga jiilaalka
Hawada qolka waa inaysan noqon mid aad u qalalan, sababtoo ah taasi ma jecla xitaa orchid midkood. Waxay jeceshahay hawada diiran oo qoyan. Si loo soo saaro qoyaanka, tusaale ahaan, dhirta waxaa lagu buufin karaa biyo. Si kastaba ha ahaatee, tani waa tallaabo gaaban oo keliya. Mid waxay u egtahay in kuleyl loo siiyo warshadda xilliga jiilaalka iyada oo la gelinayo dabka. Laakiin hawada diiran ee hawada diirrani waxay waxyeelleysaa orchid, maxaa yeelay waxay hoos u dhigtaa qoyaan badan oo loo baahan yahay.
4) Digniinta markaad goynaysid - xididdada cirifka ayaa muhiim u ah orchids
Tixraac kale oo daryeel ah wuxuu ka hadlaa xididdada ka baxsan dheriga. Kuwani kuma riyaaqaan inay fiiriyaan. Si kastaba ha noqotee, xididdada anteenadu waxay muhiim u yihiin orchid. Waxay yihiin rugta geedka iyo sidaas darteed mas'uul ka ah bixinta nafaqada. Waxaa jira hal xaalad oo keliya: haddii xididdadu ay jajabaan ama dhintaan laga yaabo in laga yaabo in laga saaro.
5) Qiyaasta bacrimin saxda ah
Orchid wuxuu leeyahay shuruud nafaqo oo yar. Wejiga dhirta ee warshadda waa laga bilaabo Abriil ilaa Sebtembar. Kaliya waqtigan geedka waa in la bacrimiyo ugu badnaan laba jeer bishii. Ka dib bacarimiddu maahan wax muhiim ah, sidaas darteed waa in laga saaraa.
6) Ha ku badalin heerkulka badan
Orchid wuxuu jecel yahay caado. Tani waxay sidoo kale khuseysaa heerkulka heerkulka. Haddii heerkulku isbeddelo qolka uu orchid ku nool yahay, mar dambe ma dareemayo fiicana joojinta ubax. Si looga hortago, daryeelka waa in la qaadaa in heerkulka qolka uu ku dhow yahay isla sanadka oo dhan.
Midabaynta bogga orchids
Midabaynta bogga orchids ee dadka waaweyn